← ရှေးခေတ် မဒီနာရွှမြို့တော် နှင့် မစ်ဂျိဒ်နဗ၀ီ ပုံ
တမန်တော်ချုပ်မိုဟမ္မဒ် (စွ) ၏ အထုပ်ပတ္တိအကြောင်း →
တမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ)၏ ဖခင်မှာ အီစာဖြစ်သည်။ ၄င်းတမန်တော်သည် အရှင်မြတ် အား အေဗဒတ်သ်များစွာပြုသူ အဖြစ်၎င်း လောကစည်းစိမ်များအား ကျောခိုင်းသော နဗီတမန်တော်တစ်ပါးအဖြစ်၎င်း ကျော်ကြားပါသည်။
တမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ)၏ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌန်မှာ အရပ်အမောင်းနိမ့်ပြီး၊ မျက်နှာတော်မှာ နီရဲလျှက်ရှိပြီးသည်။ ဦးခေါင်းရှိဆံတော် မှာ ဖြောင့် တန်းလျှက်ရှိ သည်။ ဒါရီ (မုတ်ဆိတ်)မှာ ရှည်လျား၍ အချို့သော မုတ်ဆိတ်တော်မှာ ကောက်ကွေးလျှက် ရှိသည်။ မျက်နှာတော် အလွန် လှတင့် တယ်ပြီး၊ မွန်မြတ်သောစာရိတ္တဖြင့် ပြည့်ဆုံ တော်မူသည်။ အသံတော်မှာလည်း အလွန်လှပတင့်တယ်ပြီး၊ အလွန်သာယာ လှသည်။
နဗီတမန်တော်လည်းဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းပြည်ကိုလည်း အုပ်ချုပ်ရသော ဘုရင် တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ တမန်တော် ဒါဝူးဒ်(အ)သည် ငယ်ရွယ်စဉ် ကပင် တောင့်တင်း သော ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ဝဝဖြိုးဖြိုးရှိခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် တောင့်တင်း ခိုင်မာလှသော ဂျားလူးသ်အမည်ရှိ ကာဖိရ် မိစ္ဆာအား သတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ တမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ)သည် ကိုယ်တော်တိုင် သံချပ်ကာအကျီင်္ကို ပြုလုပ်တော်မူ လေသည်။ ၄င်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ညဖက်တွင် မအိပ်ဘဲ“အေဗာဒတ်သ်” ပြုတော်မူပြီး တစ်ရက်ခြား ရိုစာဥပုပ်စောင့် တည် တော်မူခဲ့သည်။
တမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ)၏ ခေတ်ကာလ၌ “အိုင်လာ” ဒေသနေ အမျိုသားများသည် အလ္လာရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကို ဖီလာဆန့်ကျင်ကြသည်။ အရှင်မြတ်က စနေနေ့ တွင် ငါးမဖမ်းကြရဟူသော အမိန့်ကိုဆန့်ကျင်၍ ထိုနေ့တွင် ငါးဖမ်းကြသောကြောင့် အပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ဖီဆန်သူ အပေါင်းတို့အား လူအဖြစ်မှ မျောက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ပစ်တော်မူခဲ့လေသည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်း ခံရသူတို့သည် မျောက်ဘဝဖြင့် သုံးရက်နေပြီး သေကြေပျက်စီးကုန်ကြလေသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ) ထံသို့ “ဇဗူးရ်ကျမ်း” ကိုချပေး တော်မူခဲ့သည်။ တမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ) ယခုလက်ရှိ “ဂျေရုဆလင်မြို့” ၌ တည်ရှိ သော “ဗိုင်တွလ်မိုကာဒတ်စ်” ကျောင်းတော်ကို အုတ်မြစ်ချတော်မူခဲ့သည်။ တမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ) သည် နှစ်ပေါင်း (၄၀) တိုင်တိုင် တိုင်းပြည်ကို မင်းလုပ်အုပ်ချုပ် တော်မူခဲ့သည်။
တမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ) သည် သက်တော်(၁၀၀)နှစ်တွင် အရှင်အမိန်ကို ခံယူခဲ့ လေသည်။ ထိုအချိန် “ဗိုင်တွလ်မိုကာဒတ်စ်” ကျောင်းတော် မှာ ဆောက်တည်၍ မပြီးသေးသဖြင့် သားတော်စိုလေမန်(အ)အား ဌင်းကျောင်းတော်ပြီးမြောက်သည် အထိ တည်ဆောက်ရန် မှာ တမ်းပြုခဲ့လေ သည်။ နဗီတမန်တော်ဒါဝူးဒ်(အ) ကွယ်လွန် ချိန်၌ သားတော်(၁၂) ပါး ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။
Being Muslim You Have A Opportunity TO See This HAZRAT DAWOOD (AS), Israel
Traditional tomb of David. In the early 16th century this Crusader cenotaph in the lower room of the Cenacle, the site venerated at least since the fourth century by Christians as the location of the Last Supper and the descent of the Holy Spirit at Pentecost, became misidentified as David’s tomb. In 1968 the Israeli Ministry of Religious Affairs awarded the complex to the Diaspora Yeshiva.